Ntụgharị asụsụ ozugbo enwere n'efu n'efu Esi m mac
Ntụgharị asụsụ ozugbo enwere n'efu n'efu
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Spanish bụ asụsụ nke abụọ ndị mmadụ na-asụ n'ụwa niile, na-esote Chinese na ike tupu Bekee, asụsụ a na-ejikarị na mgbasa ozi, ihe nkiri na ndị ọzọ bụ Bekee. Na Bekee ọ ghọrọ asụsụ zuru ụwa ọnụ nke onye ọ bụla nwere ike iji kwurịta okwu. O yikarịrị ka ọ bụrụ na anyị na-achọ nkọwa doro anya na otu isiokwu ma ọ bụ ngwaahịa, ozi a adighi n'asusu anyi. Ọ bụrụ n ’ọ bụ n’asụsụ bekee, imirikiti n’ime anyị nwere ihe ọmụma ga-ezuru anyị ịghọta ọtụtụ ihe dị na ya, mana ọ nwere mgbe ọ bụla okwu na-egbochi anyị ịghọta ihe ahịrịokwu pụtara.
Maka nke a, anyị nwere ike iji onye ntụgharị Google, mana anyị ga-emepe ihe nchọgharị ahụ wee pịa akara ahụ ebe anyị nwere njikọ ahụ echekwara, nke nwere ike ime ka anyị tufuo eri nke ihe anyị na-agụ. Mana ọzọkwa anyị nwere ike iji ngwa ntụgharị dị iche dịnụ na Mac App Store. Taa, anyị ga-ekwu maka ntughari ntabi anya, nke dị maka nbudata n'efu maka obere oge.
Ntughari ozugbo, na-enye anyị ohere site na mkpirisi keyboard, nweta windo ngwa inwe ike itinye okwu ọchụchọ ma nweta ntụgharị asụsụ ahụ ọsọ ọsọ. Anyị nwere ike na-agba ọsọ na ngwa na mmalite nke OS X nke mere na ọ na-agba oge ọ bụla anyị na-amalite anyị Mac na n'ụzọ dị otú a mgbe niile nwere ya na aka.
Tụgharịa asụsụ ozugbo na-enye anyị nkwado maka ihe karịrị asụsụ 90, ọ na-echekwa akụkọ ihe mere eme nke nsụgharị niile maka ndị ahụ, dị ka m, ndị nwere ncheta azụ ma na-agagharị okwu ndị a sụgharịrị karịa oge ọ bụla. Iji banye ngwa ngwa nsụgharị Ntugharị Ngwa ngwa, anyị ga-pịa Control + S, agbanyeghị na anyị nwere ike ịgbanwe ụzọ mkpirisi keyboard a ma ọ bụrụ na anyị jiri ngwa ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ntụgharị asụsụ ozugbo enwere n'efu n'efu
Anaghị m azụta ngwa ọ bụla na-adịghị na Spanish, ọ bụrụ na ndị na-asụ Spanish mere otu ihe, ha ga-eche maka ya.
Merci, n'ime ala m ghọtara nkọwa gị mana, mmadụ, ngwa ahụ enweghị ihe omimi: ị tinyere okwu ahụ n'ime igbe na, na nke dị n'aka nri, ị nwere ntụgharị asụsụ ahụ. Ma ọ bụ na ị ga-emechi ya….
Apple lekwasịrị anya na mgbalị ya na India
Songa Sega na-egosi na Apple TV